“မြန်မာ့ဝိဇ္ဇာဓရလောက၌ လွန်စွာနာမည်ကြီးလှသော အံ့ဖွယ်အဆောင် ပိတုန်းအကြောင်း” – စှယျစုံသုတ
“မြန်မာ့ဝိဇ္ဇာဓရလောက၌ လွန်စွာနာမည်ကြီးလှသော အံ့ဖွယ်အဆောင် ပိတုန်းအကြောင်း”
ပိတောက်သားဖြင့်လုပ်ထားသောလှည်းပဒေါင်းသားကိုဖင်ဖောက်ပြီးပြဒါး ထည့် ပဒိုင်းသားနဲ့ ပိတ်ကာ လောကီအစီအရင်ပညာများအတိူင်း အသက်သွင်းသိဒ္ဓိတင်အစောင့်သွင်းကာ စီရင်ကြကုန်၏။ စီရင်နည်း မှာ ပိတောက်ပဒေါင်းပြဒါးပဒိုင်းကက်ကင်းဓာတ်များဆင့်ကာ မန္တန်စုတ် တာများအထိ တူညီ ကြသော်လည်း စုတ်ရမည့်မန္တန် များ စီရင်သည့်အယူအဆ များမှာဆြာတဦးနဲ့ တဦး တေ့လွဲ လေးတွေ လွဲ ကာ မူတွေကွဲ သွားကြ၏။
ကျမ်းဂန်လာ အာစရိယဝါဒများ အတိုင်းတိတိကျကျ စီရင်ရပါမူတနှစ်မှတခါ တလ မှာ ကြာသာပတေးနှင့် စနေရက် ၂ ရက်၌သာ စီရင်ရတာမို့မလွယ်ရေးချ မလွယ်ပါ။ မည်သို့ပင် ဆိုစေ မည်သိူ့ပင် မူတွေ ကွဲ ပါစေအဓိက မိမိစီရင်သည့် ပိတုန်း သည် အမှန်တကယ် အသက်ဝင်ဖို့က အဓိကကျ၏ မဟုတ်လော။ အသက်ရှိ သော ပိတုန်း သိဒ္ဓိမြောက်သောပိတုန်း မှသာအတိုက်အခိုက် ကိစ္စတွေ မှာ စိတ်ချရမည်မဟုတ်ပါလော။ စီရင်သည့် ပိတုန်း ကောင်သည် တကယ်အသက်ဝင်ကစုန်းဖုတ်တစ္ဆေ မိစ္ဆာများတင်မကဂုးံချောဂုံးတိုက်မလိုတမာမိမိအားရန်ပြုတိုက်ခိုက်ကြသောသူများ ကိုပင်လျှင် အလိုလိုတန်ပြန် သော သတ္တိထူးရှိ ပေရာ။ အတိဒုက္ခ ရောက်နေသောရရက်သားသမီးများအတွက်အမှန်အဖိုးအနဂ္ဃ ထိုက်တန်သော အဆောင်ပညာတခုဖြစ်၏။ အသက်ဝင်အောင် သွင်း တတ်ဖို့က ဤ ပညာ၏ ဝှက်ဖဲ တချပ်ဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်သည်ဆြာသခင်၏ ခိုင်းစေချက်အရ ငါ့သားရေဝိဇ္ဇာယာနပညာမှာ နာမည်ကြီးလှတဲ့ရွှေတိဂုံအရှေ့ဘက်မုဒ်ရှိဝိဇ္ဇာယာနအစီအရင်ပိတုန်းပဒိုင်းဘုရားရှိပိဒိုင်းအဖိုအမ၂ကောင်၏မေတ္တာကိုရအောင်အရယူထားကွယ့်ဟူသောမိန့်မှာချက်အတိုင်းလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်ကမေတ္တာသုတ်ဖြင့်အထူးရက်ရှည်အဓိဌာန်ဝင်ခဲ့ ရဖူး၏။
ထိုအကျိုးဆက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဆေးကုရာ၌ပိတုန်းအဆောင်များစီရင်ရာ၌ လည်ကောင်း။ အရေးကြုံက အကူညီလိုကအဖပိတုန်းနဲ့အမေပိတုန်းမယ်တော်ကြီးရေ ဟူ၍ တ လိုက်ရုံ မျှ ဖြင့်ထူးကဲစွာဖြင့် လာရောက်ကူညီကြသော အဖြစ်ပျက်များစွာမှာပြောမယုံ ကြုံ ဖူးမှ သိ ဟူသောစကားကဲ့ သို့ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ မရေမတွက်နိုင်ခဲ့ ရပေ။ တကြောင်းတဂါတာ တရွာ တပုဒ်ဆန်းသူ့မူသူ့နည်းစနစ်အားလျော်စွာ ဂမ္ဘီရလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ ဆြာအမျိုးမျိုးစီရင်နေကြသော်လည်း အချို့က ပိတုန်းဆောင်လျှင် = လာဘ်ပိတ်တတ်၏။ အချိုက ငွေမမြဲ ။ အချို့က တိုက်ပိတုန်းမို့အောက်လမ်းဆန်၏။
(သူ့မူ နှင့်သူ ) အမျိုးမျိုးပြောကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်၏မူ မှာမူ မိမိဘက်ကသာမှန်ကန်လေလေ ပြင်းထန်စွာအစွမ်းပြလေလေဖြစ်၏။ အထက်လမ်းအဆောင် ဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ မိမိဘက်ကသာမှန်ပစေ မိစ္ဆာပညာများ၌ တင်မက ဂုံးချာဂုံးတိုက်မလိုတမာအတိုက်အခံ ပြုနေသူများအားပင်လျှင် ဂျွန်းပြန်အောင်တုန်ြ့ပန် တတ်ပေရာ။ စိန်ခေါ်လျှင် တိမ်အပေါ်ထိ လိုက်မည့် ပိတုန်း ဟူ၍ မြန်မာ့ဝိဇ္ဇာဓရ လောက၌ ခေတ်အဆက်ဆက်ကျော်ကြား ခဲ့ ပေ၏။
ထက်မြက်စွာအစီအရင်ပြုထားသောပိတုန်းပဒိုင်းတကောင်ကိုယ်အပေါက်ဖောက်ကြိုးတပ်ကာလည်ပင်းဆွဲ. နယ်လှည့်လက်ဝှေ့ထိုးစားကာ အထိအခိုက်နည်း၍နာမည်ကျော်ကြားလှသောလက်ဝှေ့သမားများအကြောင်း လည်း မြန်မာ့ရာဇဝင်၌ အထင်အရှားရှိခဲ့ဖူး၏။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေပယောဂအတိုက်အခိုက်များတင်မကလှည့်ကြည့်စရာမလို ဒဏ်ပြန်အားကောင်းလှပြီး လူမိစ္ဆာများ၏ရန်ပြု ခြင်းများကိုပင် သီးမခံ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လက်တုန့်ပြန်တတ်သော
ပန်းတောင်း မြို့မှရှိတဲ့ဝန်အပြည့်နဲ့ရုန်းနေချိန်ကျိုးတဲ့လှည်းပဒေါင်း အကျိုးနှင့် ပိတုန်းရုပ် ထုပြီး ဖင်တွင် အပေါက်ဖေါက်ပြီး ပြဒါးထည့် ပဒိုင်းသားနှင့် ပိတ် ပြီး ပဒံဘုရားတွင် ပိတ်ဖြူခင်းရမည်။ ပိတ်ဖြူအပေါ်မှာ စံပါယ်ပန်းလေးတွေတင်ပြီး ပဌာန်း ၁၀၈ ခေါက် မေတ္တာသုတ် ၁၀၈ ခေါက် ပြီးလျှင် အာဆိပ်ထည့် ဂါထာ ၁၀၈ ရွတ်ပြီး အသက်သွင်းကြပါတယ်။ ပိတုန်းကို ရွှေဆေးလေး ချထားပြီး ပိတ်ဖြူနှင့် ထုတ်ထားရပါတယ်။ ခရီးသွားချိန် အိမ်ထုပ်တန်းမှာ ပိတ်ဖြူထဲ စံပါယ်ပန်းထည့်ပြီး ချည်ထားခဲ့လျှင် စိတ်ချရပါတယ်။ သူခိုးများ လာခိုးလျှင် အိမ်ပျောက်နေပါတယ်။ ( မှတ်ချက် ) ပဒံဘုရားသည် လှိုင်သာယာ ပဒံဘက်တွက်ရှိပါသည်။
ပိတုန်းရုပ်လောကီအစီရင်သည်ရှေးမြန်မာလူမျိုးတို့၏ကိုယ်ပိုင်လောကီပညာစစ်ဖြစ်သည်။ မတလုံးကြေဆရာတော်ခင်ကြီးဖျော်မှစတင်စီမံခဲ့သည်ဟူ၍၎င်းထိုထက်ရှေးကျသောပုဂံခေတ်သံသပိတ်ကြီးလက်ထက်မှစတင်၍စီရင်ခဲ့သည်ဟူ၍လည်းကောင်းတိတိကျကျမသိရသော်လည်းမြန်မာ့လောကီပညာစစ်စစ်ဟူသည်ကားသေချာလှပါသည်။ ပိတုန်းရုပ်အဆောင်အစီရင်ကိုခေတ်အဆက်ဆက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အထက်ပညာသည်များကအထက်အစီရင်ဖြင့်၎င်းခုလတ်ပညာသည်များက ခုလတ်ပညာဖြင့်လည်းကောင်း အောက်ပညာရှင်များက အောက်အစီရင်ဖြင့်လည်းကောင်း ရှမ်းလောကီပညာ ကရင်လောကီပညာတို့တွင်လည်း ပိတုန်းအဆောင်အစီရင်သည်မပါမပြီးသောအစီရင်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်ကို ထောက်၍ ပိတုန်းအစီရင်သည်အကျိုးပေးထင်ရှားကြောင်း သိမြင်နိုင်ပါသည်။ စီရင်မူအပေါ်မူတည်၍ တိုက်ပိတုန်း ပီယပိတုန်း စသည်ဖြင့် စီရင်ပုံကွဲလာသလို ပိတုန်းအရောင်မှာလဲ ရွှေပိတုန်း ငွေပိတုန်း မူလပိတုန်းရောင်စသည်ဖြင့်လဲ အသုံးပြုလာကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ လောကီပညာသည်သဘာဝမှလာသောပညာသာဖြစိ၍သဘာဝနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖို့အရေးကြီးပါသည်။
တချို့ကလဲ ဓမ္မာ အတွင်းရန်မိနေ၍ အတိုက်များကြောင်း ရန်ဓာတ်များကြောင်း အစွမ်းကြီး၍ သတိထားစီရင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့်ထောက်ပြပြောဆိုကြပါသည်။ ပိတုန်းအစီရင်သည်အစွမ်းကြီးသလောက်ရန်ဓာတ်မိနေသည်မှာလဲအမှန်ဖြစ်ပါသည်။ထိုအတွက်လဲရန်ဓာတ်ကိုဖြေရန်ဖြေနည်းသိဖို့လိုပါသည်။ ဖြေနည်းသိပါက မည်သည့်နေ့သားမဆို ဆောင်နိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်သောကြာသားများ အထူးဆောင်သင့်ပါသည်။ ပိတုန်းအစီအရင်နှင့်တွဲ၍လည်းပိတောက်သားပုတီးတွင်ပိတုန်းရုပ်စီရင်၍လည်း အသုံးပြုကြပါသည်။ ပိတုန်းရုပ်၏အစွမ်းကိုယူ၍ပုတီးစီရင်ပါကလဲပိတုန်းရုပ်သည်ပိတုန်းနှင့်တူရပါမည်ပိတုန်းသည်ပိတုန်းရုပ်နှင့်မတူပါကအစွမ်းထကိမြတ်မည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပိတောက် ပိတုန်း ပုတီးဟုခ်ါသော်လည်း ပုတီးကိုပိတောက်သားဖြင့်စီရင်ပြီး ပိတုန်း ရုပ်တွင်သာ လှည်းပဒေါင်း ပိတောက်သား ကို လိုသောနက္ခတိမိချိန်တွင် ပီပီသသထု ပြဒါးသွင်း ပဒိုင်းစေ့နှင့်ပိတ်၍ ပိတုန်းရုပ်ကို သေချာစီရင်ထားခြင်းဖြစ်၍ ပိတုန်းရုပ်ပီပြင်ဖို့လိုပါသည်။
လှည်းပတောင်း ဖြစ်ရပါမည် ။ပိတောက်သား ဖြစ်ရပါမည် ။ ပန်းတောင်းမြို့ကလှည်းပတောင်းပိတောက်သားကိုပိတုန်းရုပ်ထုထုပါမည် ။ ပိတုန်း ရုပ်သည် အတောင်ပံ ဖြန့်နေသောပုံ ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး ပါးစပ် နှုတ်သီး ဟထားရပါမည်။ ရန်သူ အား တုပ်တော့ ကိုက်တော့မည့်ဟန် ထုရပါမည် ။ပိတုန်းရုပ် သည် မာန်ပါပါ နှင့် ဒေါသဟန် ဖြင့်ရန်သူများ ကို တိုက်ခိုက်တော့မည့်ပုံ ထုရမည်။ သို့မှသာ … အစွမ်းထက် သော သိဒ္ဓိတန်ခိုး နှင့်ပြည့်စုံသော သိဒ္ဓိဝင် ပိတုန်း တစ်ကောင်ကိုဆောင်ရွက် စီရင်နိုင်ပေမည် ။
ဤသို့ သိဒ္ဓိဝင် ပိတုန်း မျိူး ရရှိလာမှသာ လိုရာ ကိုလိုအပ်သလို ခိုင်းစေနိုင်ပါမည် ။ ပိတုန်းရုပ် ၏ အာနိသင် စွမ်းအား ကို … ၁။ လှည်းပတောင်း … မှန်ကန် ခဲ့ပါလျှင် သိဒ္ဓိ စွမ်းအား ၂၅%, ၂။ ပိတောက်သား … မှန်ကန် ခဲ့ပါလျှင် သိဒ္ဓိ စွမ်းအား ၂၅%, ၃။ ပိတုန်းရုပ် …….. မှန်ကန် ခဲ့ပါလျှင် သိဒ္ဓိ စွမ်းအား ၂၅%, ၄။ ပြဒါးထည့် … မှန်ကန် ခဲ့ပါလျှင် သိဒ္ဓိ စွမ်းအား ၂၅% စု့စု့ပေါင်း ပိတုန်းရုပ် တစ်ကောင် ၏ အာနိသင် သိဒ္ဓိ စွမ်းအား သည် ၁၀၀% ရှိရပါမည် ။ ဖော်ပြပါ အချက် တစ်ချက် လျော့ ပါက ထင်သလောက် မစွမ်း နိုင်ပါ ။ မိမိ ဆောင်ထား သော ပိတုန်းရုပ် သည် မည်သည့်သိဒ္ဓိ မှမရှိ ..
ထုလုပ် ဆောင်ရွက်ပုံ မှာ … လှည်းပတောင်း ပိတောက် သား ကို ပိတုန်း ရုပ်ထု ပိတုန်းဖင် ကို အပေါက်ဖောက် အပေါက် ထဲ ပြဒါး ထည့် ပါ။ ပဒိုင်း အမြစ် နှင့် အပေါက် ကို ပြန်ပိတ်ပါ ။ ပြီး လျှင် ဆေးကတ္တရာ အနက် သုတ်ပါ ။( ရွှေမချရပါ ) ထု့ လုပ်ရမည့် နေ့ မှာ … တနင်္ဂနွေ .. အင်္ဂါ .. စနေ .. ထို သုံးနေ့ တွင် ဆောင်ရွက် စီမံရပါ မည် ။ နက္ခတ် အချိန် အခါ မမှန်ပါက ထင်သလောက်မစွမ်း နိုင်ပါ ။ ပိတုန်း ရုပ် ထု့ လုပ် ရာ အချိန် သည် နှစ်ဘက်ကဏ်း ခါးပါဒ် နက္ခတ် ဝရစုပ် အချိန်အခါ ဖြစ်ရန် အလွန် အရေး ကြီးသည်။
ဤသို့ … ပိတုန်း ရုပ် များ ထုလုပ် ပြီး နောက်ရဟန္တာ သမုပ် ခဲ့သော သိမ် တစ်ခု့ တွင် သိမ် ထဲရှိ ဘုရား ရှေ့ တွင် ဆွမ်း (၅) ပွဲ၊ လက်ဖတ် (၅) ပွဲ၊ ယို (၅) မျိူး၊ ဘူးသီးကြော် ဘယာကြော် ပဲကြော် ကြက်သွန်ကြော် အာလူးကြော် အကြော် (၅) မျိူး (၃) ခုစီ ထည့် ပါ ။
စံပါယ်ပန်း (၈) ပွင့် နှင်းဆီပန်း (၈) ပွင့် နှင်းပန်း (၈) ခက် ထီးဖြူ (၃) လက် တံခွန် (၃)လက် ဖယောင်းတိုင် (၈) တိုင် ထွန်းဘုရား ကို ကပ်လှု ပူဇော် ၍ လိုအပ်သောဆုတောင်း ရပါမည် ။ ပြီးလျှင် အောက်ပါ ဂါထာ များ နှင့် သိဒ္ဓိ တင်အသက်သွင်း ရပါမည် ။
၁။ ဥုမ် ဣတိပိအရဟံ အဝိညာဏကသြသထံသဝိညာဏကံ သမံ အံ့ အံ့(၁၈) ခေါက် ရွတ်၍အသက်သွင်းရမည်။
၂။ ဥုမ် ဗုဒ္ဓံ သိဒ္ဓိ ဓမ္မံသိဒ္ဓိ သံဃံသိဒ္ဓိ မာတာပိတုသိဒ္ဓိ အာစရိယာသိဒ္ဓိ ဗြဟ္မသိဒ္ဓိ ဒေဝသိဒ္ဓိ ဝိဇ္ဇာဓရသိဒ္ဓိ ယက္ခသိဒ္ဓိ သိဒ္ဓိ အပေါင်း ထောင်သောင်း တည်ပါစေသတည်း ထက်ပါစေသည်း အောင်ပါစေသတည်း။(၁၈) ခေါက် ရွတ်ဖတ် ၍ သိဒ္ဓိ တင်ပါ ။
၃။ ဗုဒ္ဓဂုဏံ ဗုဒ္ဓစက္ကံ ဓမ္မဂုဏံ ဓမ္မစက္ကံ သံဃဂုဏံ သံဃစက္ကံ မာတာပီတုဂုဏံ မာတာပိတစက္ကံ အာစရိယဂုဏံ အာစရိယစက္ကံ သဗ္ဗဂုဏံ နုဘာဝေန သဗ္ဗစက္ကံ နုဘာဝေနတိုက် ဆြာ တိုက် ခိုက် ဆြာ ခိုက် နှိမ် ဆြာနှိမ် ချူပ် ဆြာ ချူပ် စေ ။ ဤ ပိတုန်းစေ ပိတုန်းနှုန်း ဂါထာ နှင့် (၉) ခေါက်ရွတ် ဖတ် ၍ ပိတုန်း ရုပ် ကို နှိုးထား ပါ ။
အရေးအကြောင်း ရှိလျှင် ဤ ပိတုန်းစေ ပိတုန်းအနိုးဂါထာ ကို အနည်းဆုံး (၇) ခေါက် အများဆုံး (၉) ခေါက် .. ရွတ်ဖတ်ပါ ။ မိမိ အား သူများ မကောင်းကြံစည် ၍ မရပေ ။ရန်သူ ကို ပိတုန်း ရုပ် က သိမြင်နိင်ပေသည်။လိုအပ်သလို ခိုင်းစေ ၍ ရသည် ။
အတိုက်ခိုက် မှန်သမျှ ကာကွယ်သည် ။မိမိ နှင့် တသားထဲ ထားပါ ။ အရေးကြောင်းတစုံတခုရှိလျှင် ပိတုန်းရုပ်ကမိမိအားအိမ်မက်ပေးသည်။ အိမ်မက်ထဲတွင် ပိတုန်းရုပ် ကို မြင်တွေ့ရ၏ ။ပိတုန်းရုပ် အား လက်ကိုင်ပုဝါ ထောင့်စွန်း တွင်ထုံးချည် ၍ ဆောင်ထား ရသည် ။ မည်သူ မျှ မတွေ့စေ ရ ။ အိမ် တွင် အစောင့် ထား မည်ဆိုပါကပိတောက်သား အပိုင်း တစ်ခုကို အပေါက်ဖောက်အပေါက်ထဲ ပိတုန်း ထည့် ပြီးလျှင် ပိတောက်သား နှင့် ပြန်ပိတ် မိမိ ၏ အိမ် ခြံ မြေ တွင် မြုပ်ထားရပါ မည် ။ တိုက်ခန်း ဖြစ်ပါက ထိုပိတောက်သား အား ထောင့်တနေရာတွင် မမြင်အောင် ထားရမည်။ထောင့် လေး ထောင့် လေးကောင် မြုပ်ရမည်။ တစ်ကောင် ထား တိုင်း ပိတုန်းစေ ပိတုန်းနှိုး ဂါထာ(၉) ခေါက် ရွတ်ရပါမည် ။
ဤသို့ လျှင် ပိတုန်းရုပ် အာနိသင် ကြီးမား၏ ။ရန်သူမျိူး ၅ ပါး ကာကွယ် ၏ ။သူခိုး ဓားပြ ဘေး အနုကြမ်းစီး ဘေး ကာကွယ်၏ ။ လပြည့်လကွယ် (၁၂) နာရီ တွင် ပိတုန်းအားစပယ် (၈) ပွင့် နှင့် အစာကြွေး ပြီး လရောင်ပြရ၏ ။ အိမ် ကျောင်း ဇရပ် သိမ် စသည်များတွင်၎င်း ခြံ မြေ လယ်ယာ အိမ်ဝင်း ကျောင်းဝင်း စသည်များတွင်လည်း ပိတုန်းရုပ်ကို အစောင့် အနေဖြင့်မြုပ်၍ စီရင်ထားနိုင်ပေသည် ။
ပိတောက်သား အပိုင်း တစ်ပိုင်း ကို ဖြတ်ပါ ။အပေါ်မှနေ၍ လွန် နှင့်ဖောက်ပါ ။ထို အပေါက် ထဲသို့ ပိတုန်းရုပ် ပြန်ထည့်ပါ ။ ပြီး လျှင် ပိတောက်သား နှင့်ပင် ကျပ်နေအောင်စို့ ရိုက်ပြီး ပိတ်ပါ ။ မိမိ ၏ အိမ် ခြံဝင်းခြံလေးထောင့် ( သို့ ) ခြံ ရှစ်ထောင့် တွင် ပိတုန်းရုပ် ထည့်ထားသော ပိတောက်သား ပိုင်း အား မြုပ်ပါ ။ကျောက်လောင်း ပြီး မြုပ်ထားပါက ပိတုန်းရုပ်ထည့် ထားသော ပိတောက်သား သည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာမြေကြီးထဲမပျက်စီးပဲနှင့်ထာဝရတည့်တံ့စေနိုင်ပါသည်။
ပထမ ဦးစွာ အိမ်မှာမြုပ်လျှင်အိမ်၏အလယ်ဗဟိုတွင်ပိတုန်းတစ်ကောင် မြုပ်ရမည်။ပြီး မှ ထောင့်လေးထောင့် တွင် မြုပ်ရပါမည် ။ခြံဝင်း ဖြစ်ပါ လျှင်လည်း အလယ်ဗဟို မြေကြီးတွင်ပထမဆုံး ပိတုန်း တစ်ကောင် စတင်မြုပ်ရပါမည်။တစ်ကောင် မြုပ်တိုင်း မြုပ်တော့မည် ဆိုပါက ပိတုန်းစေ ဂါထာ ပိတုန်းနှိုး ဂါထာ ဖြင့် (၉) ခေါက် ရွတ်ဆိုပြီး မြုပ်ရပါမည် ။ ထိုနည်းတူ လယ်မြေ ယာမြေ များတွင်လည်းထိုနည်း အတိုင်း ပင် ဖြစ်ပေသည် ။
ဤကဲ့သို့ပိတုန်းရုပ်ကိုစီရင်ဆောင်ရွက်ထားသောအိမ်သည်မကောင်းသော (၃၇) မင်းနတ်များနတ်မိစ္ဆာ များ မပူးကပ်ဝံ့ အနှောက်အယှက် မပြုစုန်းကဝေ သရဲတဘက်များ မကပ်နိုင်။ ထို့ပြင်သူခိုးဓားပြအနုကြမ်းသမား များ အန္တရာယ်မပြု့နိုင်ခိုးရန်လာပါက မိမိ အိမ် အား ရှာမတွေ့နိုင်ပေ။ အိမ် ကျောင်း ဇရပ် သိမ် စသည်များတွင်၎င်းခြံ မြေ လယ်ယာ အိမ်ဝင်း ကျောင်းဝင်း စသည်များတွင်လည်း ပိတုန်းရုပ်ကို အစောင့် အနေဖြင့် မြုပ်၍ စီရင်ထားနိုင်ပေသည် ။
မော်လမြိုင်မြ်ု့နယ်အတွင်းမှမွန်ရွာတစ်ရွာတွင်မိသားစုတစ်စုရှိလေသည် ။ဝိုင်းလုပ်ဝိုင်းစား ဖြစ်သောကြောင့် နှစ်အနဲငယ်ကြာအိမ်ကြီး အိမ်ကောင်း နှင့်စီးပွားတိုးတက်လာသည်။မိသားစု့တွင် လည်း မွေးမြူရေး နှင့် အောင်မြင်လာပေ သည် ။ ဤ တွင် တနှစ်လျှင် ၁ ကြိမ် ၂ ကြိမ် ကျွဲပျောက်နွားပျောက် မည်သူက ခိုး မှန်း မသိ ဖြစ်လေ၏။ညရေးညတာလဲအပြင်မထွက်ရဲ သိသိကြီး နှင့် လက် လွှတ် ကြည့်နေရ၏ ။တစ ထက် တစ သူခိုး များ က အတင့်ရဲလာ၏ ။ထို စဉ် ဝေပုလ္လဆရာတော် ကြီး ထံ ရောက်ရှိ လာ
ဒကာမကြီး …. ” တန်ခိုးကြီးသော ဆရာတော်သိဒ္ဓိကြီးသောဆရာတော် မြို့နယ်အနှံ့ကျော်ကြားနေ၍ဆရာတော်ထံအားကိုးတကြီးရောက်လာကြတာပါ ဘုရား ” တပည့်တော်မ တို့ဟာ မရှိဆင်းရဲ တဲ့ ဘဝကနေတက်လာတာပါ ဘုရား လူဆိုးသူခိုးတွေကဆိတ်တွေ့ရင်ဆိတ်ခိုးနွားတွေ့နွားခိုးနဲ့တပည့်တော်တို့လဲ ညရေး ညတာအပြင်ဘက် မလိုက်ရဲ တော့ သူတို့ အကြိုက် ဖြစ်နေတာ ဘုရား ။ဒါမို့ အိမ် အား သူခိုး အခိုး မခံရလေအောင် ..
အဆောင် ဖြစ်စေ ယတြာ ဖြစ်စေ စွန့်တော်မူပါဘုရား ..” ဟု့ လျှောက် တင်လေသည်။
ဆရာတော် ….”အေး ..အေး ..ဒါဆိုရင်ပိတုန်းရုပ်ထုထုဟပိတုန်းရုပ်တွေကို အိမ် အလည်ဗဟို မှာအိမ်တိုင် ထဲ တစိကောင်ထည့် အိမ် လေးတိုင်မှာ လွန်နဲ့ ဖောက် အပေါက်ထဲပိတုန်းရုပ် ပြန်ထည့် ပိတ်.. ငါ ကိုယ်တိုင် ဂါထာ စုပ် ပြီးအမိန့် ပြန်ပေး မယ် .. နင်တို့ကသာ ငါ ညွှန်ပြသလိုပိတုန်း ရုပ် တွေ ကိုသာ ခပ်များများ ရအောင် သွားထု ကြ ” ထိုသို့ အမိန့်ပေး ပြီး ချက်ချင်းပင် နေ့ကောင်းရက်မြတ်ရွေး ၍ ပိတုန်းရုပ် စီစဉ်ရလေ၏ ။ ပိတုန်း ရုပ် များ ထဲ ပြဒါး ထည့် ပဒိုင်း မြစ်နှင့် ဆို့ပိတ်ပြီး ဆေးကတ္တရာ အမဲ သုတ်နေလှန်းဆေး သုတ်ထား ရာ ခြောက်သွား မှ ပိတုန်းရုပ်အား အသက်သွင်း သိဒ္ဓိတင် ၍ ပိတုန်းအနှိုးအစေဂါထာ ထပ်စုပ် မနိး ၍ လိုရာ ကို အမိန့်ပေးပြီးအိမ်တိုင် ကြီးထဲတွင် အပေါက်ဖောက် ပိတုန်းရုပ်များ ကိုထည့် ၍ အသေ ပိတ်လိုကိပါတော့၏။ ခြံ လေးထောင့် တွင် လည်း ပိတုန်း တစ်ကောင်စီထည့် ၍ အမိန့် ပြန်ခဲ့လေသည်။ပိတုန်းရုပ် မြုပ်ပြီး .. နောင် လ အနဲငယ် ကြာသော် ထို မိသားစု့ သည် ဝမ်းသာအားရ ဖြင့် လာရောက်ကန်တော့ ကြလေသည် ။
“.. အဒေါ် တို့အိမ် မှ ကျွဲ နွား ပစ္စည်း တွေ ခိုးယူနေတာ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ ပါ .. ဒီအတွက် …ကျနော်တို့ ဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ် … နောင် နောင် ကိုလဲအဒေါ် တို့ အိမ်က ပစ္စည်း တွေ မခိုး တော့ပါ ဘူး။လို့ သစ္စာ လဲ ပြု့ပါတယ် .. ကတိ လည်း ပေးပါတယ် … ခိုးယူမိတဲ့ အမှား အတွက် လည်း နောင်တရလို့ မဆုံး ပါ ဘူး ..ဘာ ကြောင့် ဆို တော့ .. အဒေါ် တို့ အိမ် မှာဘာအဆောင် ရှိသလဲ ..?ဘာတွေလုပ်ထားလဲတော့ ကျနော်တို့ မပြောတက်ပါ ဘူး .. အဒေါ် တို့ အိမ် ကျနော်တို့ ခိုး ဖို့ လာတာ၃ ခါ လောက် ရှိပါပြီ ။ ဒါပေမဲ့ .. ထူးဆန်းတာကနေ့ ခင်း ပိုင်း က အိမိ ကို ဘယ်လို မှတ်ထားပါစေ ခိုး ဖို့ လာရင် လမ်းမှား အိမ်မှား အိမ်ကို ရှာလို့မတွေ့ပဲ အိမ် ရှာရင်း မိုး လင်း သွားတာနဲ့ပြန်ပြေး ရတော့တာပဲ လို့ . ပြောသွား ပါတယ် ဘုရား ..
ဤ ကား ဆရာတော် ကြီး အစီအရင် ဖြစ်သောပိတုန်း ရုပ်၏ကိုယ်တွေ့ အား ဆရာတော် မှရေး သား တင်ပြ ခဲ့ ခြင်း ဖြစ်ပေသည် ။ဆရာတော်၏ ပိတုန်းရုပ် အစီရင်အား မြုပ်နှံအဆောင် အဖြစ်ဆောင်ပြီး နောက် ဖြစ်ရပ်မှန်များစွာ ဆရာတော် တင်ပြ ခဲ့သည် များ ကိုအလျဉ်း သင့်သလို ရေးသား ဖော် ပြ ပေးသွားပါဦးမည် ။ ကျမ်းကိုး ဝေပုလ္လရာမ ဆရာတော်
ရုပျဆိုးလှနျးလို့လှောငျပွောငျနတေဲ့သူတှကေို သူဌေးဖွဈအောငျကွိုးစားပွီး ကောငျမလေးခြောခြောလေးကို တှဲပွလိုကျတဲ့ အမြိုးသား
နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့ မိခငျဖွဈသူအတှကျ မုနျ့ဖကျထုပျရောငျးပွီး ရှာကြှေးနတေဲ့ (၁၁)နှဈအရှယျ ကလေးငယျ